Since 1960 – wasiirada maaliyada iyo hawlaha guud oo ka hadlay mowqifka xukuumada ee muddo kordhinta – Toko Online Herbal
Since 1960 – wasiirada maaliyada iyo hawlaha guud oo ka hadlay mowqifka xukuumada ee muddo kordhinta
Wasiirada Maaliyada iyo Hawlaha guud oo Ka Hadlay Mowqifka Xukuumada ee Muddo Kordhinta
Har geysa (SN)- Wasiirka Wasaarada Maaliyada Mudane Xuseen Cali Ducaale iyo Wasiirka Wasaarada Hawlaha Guud iyo Guryaynta Mudane Siciid Sulub Muxumed , ayaa shir jaraa’id oo ay Maanta wada jir ugu qabteen Xarunta Wasaarada Maaliyada jawaabo kulul ka bixiyay hadalo Dhawaan ay Warbaahinta ku Faafiyeen Gudoomiyayaasha Mucaaridka
Wasiirka Hawlaha guud oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi ’Waxa aad moodaa sababo farsamo darteed inay doorashooyinkii aanay wakhtigodii ku dhacayn , sidaasi darteed xukuumada Somaliland ee Madaxweynaha Somaliland Mudane Daahir Rayaale Kaahin , marnaba may codsan ilaa imika in Muddo kordhin la sameeyo habeena ilaahay ha ka yeelee , xukuumadu waxay diyaar u tahay inay doorashooyinka hir galiso , balse waxa dib u dhaca keenay ma aha Haddii ay duruufi timaado u baahan in muddo kordhin la sameeyo , Madaxweynaha waxa u banaan oo sharciga iyo dastuurku awood u siinayaa inuu guurtida u qoro qoraal oo uu yidhaahdo asbaabahaas ayaa jiree Muddo kordhin sameeya , laakiin weli may dhicin mana dhacayso , haddii Bishan loo dareerayo doorasho xukuumadu waa u diyaar’’.
Wasiirku waxa uu ku adkaystay in Xukuumada uu Madaxda u yahay Madaxweyne Rayaale aanay doonayn in wakhtiga loo kordhiyo , waxa kale oo uu sheegay in ay Xukuumadu gaadhay Xuduudaha dhinaca Bari ee dalka.
Wasiir Sulub oo hadalkiisa sii watana waxa kale oo uu yidhi ‘’Waxa masuuliyad darro ah oo aan u malaynayaa in aan lagu dooranayn Asxaabta Mucaaridka ah qaarkood , oo aynu jaraa’idka ku maqlanay iyago leh waxa isa soo urursatay Faqash , Hengash , NNS iyo Beelihii la cafiyay , ninka waxii aynu soo dhaafnay 1991-kii inagu celinayaa soo ma aha nin aan jiritaanka Somaliland aan ogolayn’’.
Wasiirka Wasaarada Maaliyada Somaliland Mudane Xuseen Cali Ducaale ‘’Cawil’’ oo shirkaasi Jaraa’id ka hadlay ayaa isna yidhi ‘’Waxaan Saaxiibaday Axmed Siilaanyo iyo Faysal Cali Waraabe aan kula talinayaa mansabka aad doonaysaan iyo hadalada aad ku hadlaysaan ha is waafaqeen. Siilaanyo iyo Faysal Waxaan leeyahay yaynaan dalka Mashaakil ku abuurin , waxana aanu leenahay mar kale nala tartama , iyadoo aynu hore u tartanay oo kulmiye oo oodihiisa wataa tartan aanu galnay kana helnay’’ ayuu yidhi Mudane Cawil.